Soo iibso budada Levonorgestrel (797-63-7) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Galmada Horumarinta Deedaha / Levonorgestrel budada
Rating: SKU: 797-63-7. Categories: Isticmaalka Dheddiga, Galmada Horumarinta Deedaha
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaam qiyaas ah budada Levonorgestrel (797-63-7), iyadoo la raacayo nidaamka Xeerka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Macaanka Levonorgestrel waa hormoon kiniin ah oo loo yaqaan 'crystalline white hormone hormone', wuxuu ka shaqeeyaa kahortagga sii daaya ukunta ugaxda ugxanta ama ka hortagga bacriminta ukunta by shahwada (unugyada taranka). Waxa kale oo ay ku shaqeyn kartaa adigoo beddelaya dahaarka ilma-galeenka (uurka) si looga hortago horumarinta uurka. Levonorgestrel waxay inta badan u isticmaalaan in looga hortago uurka, waxaa badanaa la bixiyaa isku dhafka rasmiga ah (Norgestrel, 6533-00-2).
Daawo budada loo yaqaan 'Levonorgestrel'
Macaanka Levonorgestrel Calaamadaha aasaasiga ah
Name: Macaanka Levonorgestrel
Qaaciddada Molecular: C21H28O2
Miisaanka kelli: 312.45
micne ah: 13-ethyl-17-alpha-ethynyl-17-beta-hydroxy-4-gonen-3-one ;13-ethyl-17-alpha-ethynylgon-4-en-17-beta-ol-3-one ;13-ethyl-17-hydroxy-19-dinor-17-alpha-pregn-4-en-20-yn-3-on(+)-1 ;17-alpha-ethinyl-13-beta-ethyl-17-beta-hydroxy-4-estren-3-one ;17-beta-hydroxy-18-methyl-19-nor-17-alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one ;17-ethynyl-18-methyl-19-nortestosteron ;17-ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone ;18-methyl-17-alpha-ethynyl-19-nortestosterone
Dhibcaha Biyaha: 206 ° C
Boiling Point: 459.1 ° C at 760 mmHg
Macluumaad Dheeraad ah. Root Levoorgestrel budada si aad u ogaato
Levonorgestrel isticmaalka budada iyo qaadashada
1. Ka hortagga uurqaadida:
Daawooyinka Levonorgestrel waxaa loo isticmaalaa monophasicand triphasicformulations ee kiniinada ka hortagga uur-qaadista ee isku-jirka ah, iyada oo la isticmaalayo qiyaasta monophasic-ka oo ka bilaabma 100-250mg, iyo qiyaasta kala-baxa ee 50aqg / 75aqg / 125mg. Waxaa lagu daraa estrogen ethinylestradiol ee ku saabsan qaababkaas.
Qiyaasta maalinlaha ee aadka u hooseeya ee 30μg, budada Levonorgestrel waxaa lagu isticmaalaa qaar ka mid ah progestogen oo keliya kiniiniyada.
Ka hortagga degdegga ah
Macaanka Levonorgestrel waxaa loo isticmaalaa kiniiniyada ka hortaga uur-qaadista (ECPs), labadaba isku-darka guud ee Yuzpe kaas oo ay ku jiraan estrogen, iyo waliba Levonorgestrel-ki budada ah. Nidaamka budada Lewonorgestrel waxay isticmaalaan budada Levonorgestrel ee budada 1.5 (sida hal mar ama laba xabbo mg 0.75 xabbo saacado 12) laga soo bilaabo maalmaha 3 ee galmada aan la ilaalin, iyada oo hal daraasad oo tilmaamaysa in bilawga dambe ee saacadaha 120 (5 maalmood) kadib galmada waxay noqon kartaa wax ku ool ah.
Habka aasaasiga ah ee ficil-celinta budada cayriin ee Levonorgestrel oo ah kiniinka ka hortagga uurka ee degdegga ah ee loo yaqaan 'progestogen-kaliya' waa, sida laga soo xigtay Xiriirka Caalamiga ah ee Haweenka iyo Dhalmada (FIGO), si looga hortago in la bacrimiyo iyadoo la joojinayo ugxanta ugana sii dureysa xabka makaanka. FIGO waxay tiri: dib-u-eegista caddayntu waxay soo jeedinaysaa in LNG [levonorgestreol] ECPs aysan ka hortagi karin abuurka beedka bacrimiyey. Luqadda ku saabsan abuurka waa inaan lagu darin calaamadda alaabta LNG ECP. ” Bishii Nofeembar 2013, Hay'adda Dawooyinka Yurub (EMA) waxay oggolaatay isbeddel lagu sameeyo calaamadda iyada oo sheegtay in aysan ka hortegi karin in lagu beero ukumo la bacrimiyey. Daraasado kale ayaa wali hela caddaynta oo aan caddayn. In kasta oo aysan u badneyn in ka hortagga uurka degdegga ahi uu saameyn ku yeesho abuurista haddana waa wax aan suurtagal ahayn in gebi ahaanba laga takhaluso suurtagalnimada saamaynta bacriminta kadib. Bishii Nofeembar 2013, EMA sidoo kale waxay oggolaatay isbeddel lagu sameeyo astaanta HRA Pharma ee NorLevo iyadoo leh: “Tijaabooyinka caafimaad, waxtarka ka hortagga uurku wuxuu hoos u dhacay haweenka culeyskoodu yahay 75 kg [165 rodol] ama ka badan, budada Levonorgestrel waxtar kuma lahan dumarka miisaanka leh in ka badan 80 kg.
Muuqaalka guud ee budada Levonorgestrel
Nolosha khafiifka ah
Halabuurka saxda ah
Nadaafad ahaan waa la shaqeynayaa
Digniin ku saabsan budada Lewonorgestrel
Budada cayriin ee Levonorgestrel waxay la mid tahay dhammaan daawooyinka, qaar ka mid ah waxyeelooyinka aan loo baahnayn waxay ka dhici karaan isticmaalka budada Levonorgestrel. Had iyo jeer la tasho dhakhtar ama xirfadle daryeel caafimaad talo caafimaad intaadan isticmaalin. Saameynaha ugu caansan ee qaadashada 1.5 mg Levonorgestrel budada ceeriin ee tijaabooyinka bukaan socodka (oo lagu soo warramey 10% ama in ka badan) waxaa ka mid ah: matag, finan, dawakhaad, madax xanuun, lallabbo, niyadjab, finan, miisaanka oo kordha, hoos u dhaca HDL, calool xanuun, barar naaska ka dib adeega, xanuunka makaanka,, caadada oo dib u dhacda, caadada culus, dhiiga makaanka, iyo daal, amenorrhea. Beerka iyo kelyaha oo aan shaqeynin, tirooyinka naaska ayaa la daldalay .; waxyeellooyinka caadiga ah (oo lagu soo warramey 1% ilaa 10%) waxaa ka mid ah shuban, matag, iyo caadad xanuun badan; Dhibaatooyinkan soo noqnoqda ayaa badanaa ku lumay 48 saacadood gudahood, ma noqon karto kiniiniyada ka hortagga uurka ee caadiga ah, si loo qaado tallaabooyinka xiga ee ka hortagga uurka ee la isku halleyn karo ee soo socda ka hor Haweenka sigaarka caba ma aha inay qaataan (iyadoo ay ugu wacan tahay cudurka wadnaha iyo xididdada oo adkaaday).
Dufanka Levonorgestrel (ama lor-norgestrel ama D-norgestrel) waa jiilka labaad ee synogetic progestogen, waa farsamo ahaan aan lagu xalin karin biyaha, loona shubo kloroform, oo si xun u foori kara ethanol iyo methylene chloride. Iyadoo la raacayo dhaqdhaqaaqiisa progestogenic, budada cayriin ee Levonorgestrel waxay leedahay saamayn antigonadotropic, waxayna awood u leedahay in lagu xakameeyo bacriminta iyo waxsoosaarida hormoonka galmada labadaba dumarka iyo ragga labadaba, waxay u dhaqmeysaa in ay joojiso ugxantu ayadoo la xakameynayo gonadotrophin sii daaya qanjirka pituitary. Tani waxay keenaysaa heerarka la xakameynayo ee hormoonada hormoonada kobcinta (FSH) iyo hormoonka luteining (LH) taas oo keenta in la joojiyo horumarinta follicles iyo uureysiga. Waxaa loo isticmaalaa sida firfircoon ee hormoonnada hormoonnada, kiniiniyada ka hortagga uurka, kiniinnada progestogen-ka, kiniiniyada ka-hortagga uur-qaadista, hababka intrauterin, ilmagaleenka ka-hortagga uur-qaadida, iyo daaweynta hoormoonka beddelidda, laakiin ma difaaci karto cudurrada galmada lagu kala qaado. oo loo yaqaan D-norethindrone, ayaa ka tagay Kanok ketone. Haddii aad rabto natiijo wanaagsan, waa in lagaa qaadaa sida ugu dhaqsiyaha badan saacadaha 72 ee galmada, iyo mar labaad saacadaha 12. Daawada waxay waxtar badan tahay sida ugu dhakhsaha badan ee loo qaato galmada ka dib.
Biyaha budada ah ee Levonorgestrel
Suuq-geynta Macdanta Levonorgestrelraw
Sida loo soo iibsado budada Levonorgestrel ee AASraw
1.To nagula soo xiriir emailkayaga nidaamka baaritaanka, ama skype online wakiil adeegga macaamiisha (CSR).
Kiniiniga qaderka ah ee loo yaqaan "Cyproterone Acetate"
Nootropics budada (14)
Budada Spermidine (3)
Galmada Horumarinta Deedaha (11)
Xabbad dufan leh (15)
Qaar kale waxay (68)
Laga soo bilaabo Reddit & Quora: 12 Su'aalo (Dood kulul) oo ku saabsan NMN
Su'aalaha Badanaa La Isweydiiyo Ee Ku Saabsan Sunitinib Malate 丨 AASraw
Waa Maxay Dawooyinka Ugu Waxtarka Badan Ee Lagu Daweeyo Kansarka Naasaha?
Daawooyinka Ka-hortagga Kansarka Acalabrutinib: Daaweynta loogu talagalay CLL / SLL / MCL